यस्तो सपना देख्नु भो ? बुज्नुहोस सम्वृद्धि र धन प्राप्त हुँदैछ ! – Hamrosandesh.com
निद्रामा हरेक व्यक्तिले सपना देख्छन् र आफुले देखेको सपना बारे प्राय मानिसहरु चिन्तित हुने गर्दछन् । सपनाले भविष्यमा हुने राम्रो वा नराम्रो घटनाको बारेमा पहिला नै जानकारी दिन्छ । तर हामी ती संकेतलाई बुझ्न सक्दैनौं । सुतेपछि सपना देख्नु सामान्य हो । तर निन्द्रामा राम्रो सपना देखे त ठिक हो तर नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ या कुनै पनि कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहनु भएको छैन भने अब सचेतन बन्नुहोस् । प्राचीन धर्मग्रन्थहरु जस्तै वाल्मिकी रामायण, अग्नी पुराण आदिमा सपनाको माध्यमबाट भविष्यमा हुने घटनाहरुको बारेमा जानकारी पाएको वर्णन भेटिन्छ।
यस्तो सपना देख्दा धन मिल्छ
१ अप्सरा देख्नु – धन र सम्मान प्राप्त २ लास देख्नु – धन लाभ ३ अंग दान गर्नु – उज्जवल भविष्य, पुरस्कार ४ आँधीबेहरीमा लड्नु – सफलता मिल्नु
५ कन्या देख्नु – धन बृद्दी ६ हत्या हिंसा देख्नु – सौभाग्य बृद्दी ७ रगत देख्नु – धन प्राप्ति ८ रगतको वर्षा देख्नु – देशमा कुनै घटनाहरु घट्नु
९ रगतमा मुछिनु – धन सम्पत्ति पाउने लक्षण १० औंठी लगाएको देख्नु : धन प्राप्त हुन्छ ११ घर बनाएको देख्नु : धन हात लाग्छ १२ कमलको फूल देखेमा : धन प्राप्तीको संकेत १३ तरभुजा देख्नु : बुझ्नुस् धनलाभ हुँदैछ १४ गरिवी विपन्नता देख्नु : शुभ ,विपनामा समृद्धी दिलाउँछ
१५ सुगाको तोता देख्नु : निक्कै शुभ ,धनप्राप्तिको संकेत १६ गाइ वा भैसीको थुन छोएको देख्नु : राम्रो मानिन्छ १७ तास खेलेको देख्नु : ब्यापार वृद्धी हुने र धन बढ्ने संकेत १८ अजगर देख्नु : शुभ १९ आगो देख्नु : गलत तरिकाबाट धन प्राप्ति २० गुण्डागर्दी गर्नु : धन प्राप्ति,जागिर मिल्नु